Vanhu Vakawanda Vanoungana muNhandare yeOrlando Vachirangarira Amai Madikizela Mandela
Vanhu vakawanda vakabva kumativi mana enyika vakaungana nezuro muOrlando Stadium muSoweto vachirangarira mabasa akaitwa nemurwiri werusununguko muSouth Africa, Amai Winnie Madikizela Mandela, avo vakashaya nemusi weMuvhuro svondo rapera.
Vanhu vazhinji vakaenda kumunamato wekurangarira Amai Mandela vakabva kumapato ezvematongerwo enyika akasiyanasiyana emuSouth Africa, vamiririri vemizinda yedzimwe nyika muSouth Africa, pamwe nehama neshamwari, kunyange hazvo vanhu vakawanda vakange vari pamunamato uyu vaive vanhukadzi.
Vachitaura pamunamato uyu, imwe nhengo yeANC, Amai Jessy Duarte, vakati Amai Mandela vakange riri gamba, vari munhu asina humbimbindoga.
Vachitaurawo pachiitiko ichi, mutevedzeri wemutungamiri weSouth Africa, VaDavid Mabuza, vakati Amai Mandela vakachengeta vanhu vakawanda mumba mavo apo vatema vakange vachirwira rusununguko.
Vakatiwo Amai Mandela vakange vari munhu akashinga, asina hutsinye, aibatanidza vanhu, uyewo vakange vachivenga rusarura ganda. Vakavimbisa kuti nyika yeSouth Africa ichaenderera mberi nekusimudzira nyika yavo, sezvo ichi chaive chido chemufi.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika, VaDewa Mavhinga, vakarumbidza Amai Mandela vachiti ndivo vakaita kuti zita raVaMandela riite mukurumbira panguva iyo VaNelson Mandela vakange vari mutirongo. VaMavhinga vakati nekuda kweizvi, nyika yeSouth Africa yakarasikirwa zvikuru nekushaya kwavo.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato rinopikisa reMDC T mudunhu reJohannesburg, VaSimbarashe Mujeyi, vanoti kunyange hazvo Amai Mandela vakavasiira hushingi, dambudziko riripo nderekuti vashaya panguva iyo dzimwe nyika dzemuAfrica dzakasununguka dziri kudzvinyirira vanhu vadzo.
Mutungamiriri webato rinopikisa re Inkata Freedom Party, Va Mongosuthu Buthelezi, vakati Amai Mandela vaive hanzvadzi, amai uyewo shamwari, kwete kwavari chete, asi kuvanhu vese. VaButhelezi vakaenderera mberi vachiti Amai Mandela vaive munhu akange akashinga, uyewo akachengeta mhuri dzakawanda apo nyika iyi yairwira rusununguko.
Vemapato anopikisa hurumende vakakurudzirawo hurumende yeAfrican National Congress kuti ienderere mberi nezvido zvakarwirwa naAmai Mandela, pamwe nekuti hurumende yaVaRamaphosa idzore ivhu kuvanhu vatema.
Amai Mandela, avo vakange vave nemakore makumi masere nerimwe, vachavigwa neMugovera uno muguta reJohannnesburg.